Qaramada midoobey oo qoraal dardaaran ah u soo dirtay madaxda somalida ee heer federaal iyo dowlad gobaleed ee la filayo in uu shirku uga furmo caasimadda–muqdishu. – ASM Raage
Posted byabdullahi87 May 20, 2021 Posted inwararka somaliga ah
Qoraal goordhaw kasoo baxay xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay shirka wadatashiga arimaha doorashooyinka looga hadlayo ee ka furmaya teendhada Afisiyooni ee Muqdisho. Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqday hogaamiyaasha Soomaalida ee shirka ka qeyb galaya in si daacadnimo ku jirto shirka uga qeyb galaan kana shaqeeyaan in shirka guuleesto oo heshiis raali lagu yahay uu kasoo baxo.
”Waxaan ku dhiirrigelinnay dhammaan hoggaamiyeyaasha Soomaaliyeed in ay si daacadnimo leh uga qeybgalaan Shirka Muqdisho ka dhacaya si dhakhso looga heshiiyo hirgelinta doorashada.” ayaa lagu yiri Qoraalka Qaramada Midoobay.Qoraalka kasoo baxay Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay taageerayaan shirka wadatashiga Qaran , waxa ayna ugu baaqeen hogaamiyaasha Soomaalida in ay la yimaadaan tanaasul iyo is afgarad.
”Tanaasul iyo is afgarad ayaa loo baahanyahay si Soomaaliya ay horay ugu sii socoto ugana faa’iideystaan dhammaan ka dadka Soomaaliyeed. Ra’iisul Wasaare Rooble iyo madaxda kale ee Soomaaliyeed waxa ay heystaan taageerada Qarammada Midoobay ee ku aaddan guuleysiga Shirka Wadatashiga Qaran ee Doorashooyinka ee ay Soomaalidu hoggaamineyso.”
ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay Qaramada Midoobay.Shirka Wadatashiga Qaran ee looga hadlayo arimaha doorashooyinka ayaa la filayaa in uu ka furmo Teendhada Afisiyooni, waxaana shirkan hogaaminaya Ra’isul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo lagu wareejiyay howlaha doorashooyinka iyo Amniga.
axmed dhuxulayste–madaxwaynaha jubaland oo gaarey magaaladda muqdishu si uu uga qayb galo shirka doorashada ee muqdishu.